Qalabka Ciyaarta Nabdoonaanta - Hengshui Jrain Frp Co., Ltd.
Qalabka Fiberglass-ka oo ah garoon caruurtu waa nabad iyo soo jiidasho u leh carruurta, iyo sidoo kale alaabada kulul sida goobta ciyaarta caruurta.
Qalabka lagu ciyaaro ee Fiberglass waxaa ka mid ah barkadaha kalluunka, mashiinnada wax lagu sawiro, aaladda biyaha lagu cayaaro iyo boodhadh kala duwan sida slide leexleexasho, slide helical, slide toos ah, slide slide, kartoonka furan, slide sl, iyo slide iwm.
Qalabka lagu ciyaaro ee Fiberglass waxaa lagu sameeyaa hannaanka gacanta lagu dhigo, oo leh awood aad u sarreysa iyo adkeyn, ma fududa in la hagaajiyo, moodada iyo qaababka muuqaalka leh. Dusha sare guud ahaan waxay qabataa jaakad gogo 'goel ah, oo ka dhigaysa dusha mid siman oo dhalaalaysa. Markii loo baahdo, gawaarida gawaarida lagu ciyaaro waxaa loo isticmaali karaa in lagu shiidi karo ka dibna jaakad rinjiga gawaarida iyo varnish laga dhigo si dusha sare u dhalaalaya.
Qalabka lagu ciyaaro Fiberglass waxaa loogu talagalay in loo sameeyo qaabab iyo midabo kala duwan. Qaababka kartoonku wuxuu u soo jiitaa carruurta isla markiiba, u oggolaada inay galaan adduunyada sheeko ee ka dibna weligood xusuusnow.
Qalabka lagu ciyaaro Fiberglass waa qalabka madadaalada weyn. Caruur badan ayaa wada ciyaari doona. Shil kasta wuxuu sababi doonaa cawaaqib xumo. Marka, nabadgelyadu aad ayey muhiim u tahay.
Qalabka lagu ciyaaro ee loo yaqaan 'fiberlass' fiberlass-ka fiberlasslass waxay taxaddaraan faahfaahin kasta si loo hubiyo amniga:
1. Qalabka dusha sare ee qalabka lagu ciyaaro waa in si fiican loogu dhejiyaa resin iyo si fiican u bogsiin. Go'itaanka iyo dhumuc aan sinnayn looma ogola.
2. Ciladaha sida dildilaaca, dillaaca, calaamadaha dib-u-hagaajinta ee muuqda, calaamadaha huwinta muuqda, laalaabyada, sags iyo crests lama oggola.
3. Kala-guurka geeska waa inuu ahaadaa mid hagaagsan oo aan sharcin.
4. Qalabka dusha sare ee gudaha waa inay nadiif ahaadaan, oo aan lahayn fiberlass galabku. Dhumucda lakabka lakabka ah ee jilicsan ayaa ah 0.25-0.5mm
Si la mid ah qalabka qalabka lagu ciyaaro ee loo yaqaan 'fiberglass ciyaarta qalabka carruurta, qolofka' fiberglass 'ayaa sidoo kale si ballaaran loogu isticmaalaa been abuurista baabuurta (qolofta gaariga, nooca gawaarida), howlgalka caafimaad (qolofka qalabka caafimaadka), kiimikada (qolofka ka-hortagga daloolka), doonta, sanduuqa wareegga, xarkaha korantada, guri koronto, radar radome, iwm.
Wax aan Sunta ahayn
Mashiinka Dabaysha ee FRP, Dhoolatus gacmeed, Fiberlass-ka Farsamaysan, Caaryada, Mashiinka Dabaysha Fiberglass, Mashiinka Dabaysha ee GRP,